Somaliland Waa Mucjiso Ku Dhex Taalla Badweyn Dhib Badan - Baarlamaanka Ingiriiska Oo Lagu Soo Qaday Qaddiyadda Somaliland - Jigjiga Online
HomeSomalidaSomaliland Waa Mucjiso Ku Dhex Taalla Badweyn Dhib Badan – Baarlamaanka Ingiriiska Oo Lagu Soo Qaday Qaddiyadda Somaliland
London (Jigjigaonline) – Rory Stewart oo ah Xoghayaha arrimaha horumarinta caalamiga ah ee Ingiriiska, ayaa Somaliland ku tilmaamay mucjiso ku dhex taala badweyn dhibaato badan.
Stewart ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay dawladoodu ay taageeri doonto doorashooyinka kusoo fooda leh Somaliland.
Rory Stewart ayaa waxa kale oo uu ka hadlay Wada-hadalada hakad-ku ku yimid ee Soomaaliya iyo Somaliland, isagoona ka jawaabay su’aalo ay weydiiyeen xildhibaano u ololeeya qadiyada madaxbanaanida Somaliland.
“Marka hore aan uga mahad-celiyo APPG shaqada ay ka hayso Somaliland. Sida ay dhamaan xubnaha Golaha ka tirsani og-yihiin, Somaliland waa guul cajiib ah. Soomaaliya lafteedu waxay soo martay xaalad aad u adag, Somaliland na waa mucjiso yar oo ku dhex taal bad dhib badan” ayuu yiri xildhibaan Stewart.